Iikholeji zeTyhini eziPhambili: I-SAT kunye ne-ACT Score Ukuthelekiswa
I-AComparison ye-SAT kunye no-ACT Izikolo zeeKholeji zeTyhini eziPhakamileyo
Ngaba unayo izikolo ze-SAT okanye ze-ACT ozifunayo ukuze ungene kwiikholeji zabasetyhini? Eli nqaku lifanisa amanqaku e-SAT kunye ne-ACT amanqaku abafundi abawamkelweyo kwiikholeji ezilishumi elinanye eziphakamileyo . Ukuba izikolo zakho zingena ngaphakathi okanye ngaphaya kwele dilesi kwitheyibhile elingezantsi, ujoliswe ekuvunyelweni kwelinye lale kholeji. Ngolunye lwezi kholeji unikeza imfundo ephezulu, kodwa uya kubona ukuba imilinganiselo yokumkelwa kwamanye amazwe iyahluka ngokubanzi, kwaye izikolo ezininzi zivunyelwe ukuvavanya kwaye zifuneki izikolo ze - SAT okanye ze-ACT.
Iikholeji zeeNkcubeko zamaTyhini ze-SAT Score Ukuqhathaniswa (phakathi kwama-50%)
Agnes Scott Ukuvavanywa-Okungenayo ukuKwamkelwa
Barnard 640 740 630 730 - -
UBryn Mawr 610 730 610 720 - -
Iilisi 485 640 440 593 - -
Intaba yaseHolyoke Ukuvavanywa-Okungenayo ukuKwamkelwa
Ukubhala 660 740 630 700 - -
Simmons 550 650 530 610 - -
Smith Ukuvavanywa-Okungenayo ukuKwamkelwa
Spelman 500 590 480 580 - -
Stephens 458 615 440 570 - -
Wellesley 660 750 650 750 - -
Zonke iikholeji zamabhinqa kweli nqaku zamkela i-SAT kunye noMTHETHO. Uninzi lwezikolo lusempuma nasentshona-ntshona apho i-SAT yimeko ephezulu. U-Stephens, nangona kunjalo, usemtwameni we-ACT, kwaye i-96% yabafake izicelo kwiikholeji zithumele izikolo ze-ACT. Kuzo zonke izikolo, ke, kufuneka uzive ukhululekile ukusebenzisa nayiphi na imvavanyo oyithandayo. Itheyibhile engezansi ibonisa ububanzi bemigangatho yomsebenzi wokungena:
Iikholeji zeTyhini eziPhambili UMTHETHO Wamaqaku Ukulinganisa (phakathi kwama-50%)
Barnard 29 32 30 35 27 32
UBryn Mawr 28 32 30 35 26 31
Iilisi 23 29 - - - -
Ukubhala 28 32 30 34 26 31
Simmons 24 29 23 30 23 27
Spelman 22 26 19 25 21 26
Stephens 20 25 19 26 17 23
Wellesley 30 33 31 35 28 33
Ewe, kubalulekile ukukhumbula ukuba izikolo ze-SAT ziyingxenye enye yesicelo. Kunokwenzeka ukuba ube namaqaku angaphezu kwamaxabiso anikezelwe apha kwaye abuye ahlaselwe xa ezinye iinxalenye zesicelo sakho zibuthathaka. Ngokufanayo, abanye abafundi abanamanani amanqaku angaphantsi kweemigangatho ezidweliswe apha ngeniso yokungena kuba zibonisa ezinye izixhobo.
Isinathi sakho yesicelo, iincwadi zokucebisa, kunye nokubandakanyeka kwamanye amazwe kunokudlala indima ebalulekileyo kwinkqubo yokungeniswa. Eyona nto ibaluleke kuzo zonke iya kuba yirekhodi ephakamileyo yezemfundo ngamabakala amahle kwiiklasi zokulungiselela amakholeji ezinzima.
Kule nganye kholeji yabasetyhini, unokufunda okungakumbi malunga nesikolo kwaye kuthatha ntoni ukuba ulandelwe ngokulandela izikhonkwane ezingezantsi. Iigrafu ze-GPA-SAT-ACT zixhamla ngokukhethekileyo ekuboniseni ukuba iziqinisekiso zakho zilinganisa njani nabafundi abamkelweyo nabanqatshiwe:
I-Agnes Scott College: Incinci (abafundi abangaphantsi kwe-1 000) kwiikholeji yangasese eDecatur, eGeorgia, nje iikhilomitha ezimbalwa ukusuka e-Atlanta. Funda kabanzi kwiprofayili ye - Agnes Scott kunye negrafu ye - GPA-SAT-ACT ku-Agnes Scott .
Ikholeji yaseBarnard : Enye yeekholeji ezikhethiweyo kuloluhlu, uBardard uyona khetho olukhethekileyo kubathandi beedolophu kwi-campus bahlala ngaphesheya kwesitalato ukusuka kwi-Columbia University eManhattan. Funda kabanzi kwiprofayili yaseBarnard College , igrafu ye - GPA-SAT-ACT kunye ne- Barnard College photo tour .
Ikholeji yaseBryn Mawr: Efumaneka kufuphi nePhiladelphia, uBryn Mawr unenkqubo yokutshintshana kunye neSwartthmore, iHaverford, neYunivesithi yasePennsylvania. Imilinganiselo yokungena iphakamileyo.
Unokufunda okungakumbi kwi- Profile yeBrown Mawr kunye neGrafu ye- GPA, iSAT kunye ne-ACT Data ye-Bryn Mawr yokungeniswa .
Ikholeji yaseMills: Enye yeekholeji ezimbini zaseNtshona Kapa ezikulo nqaku, i-Mills inomlando osisityebi ubuyela ngo-1852. Ibha ye-admissions ayikho phezulu nje ngezona zikolo ezimbalwa eziluhlu. Funda kabanzi malunga nesikolo kunye noko kuthatha ukuthatha ukungeniswa kwiprofayili ye - Mills ne-graph ye - Mills GPA-SAT-ACT .
Ikholeji yaseHolyoke: iNtaba iHolyoke inqoba amanqaku aphezulu ngenxa yobuhle bayo, kwaye abafaki zicelo abadingeki bakhathazeke ngeSAT okanye kwi-ACT izikolo ngenxa ye-kholeji-yokukhetha umgaqo-nkqubo. Oku kuthetha, unokubona indlela othelekisa ngayo nabanye abafake izicelo kwiGrafu Holyoke GPA-SAT-ACT kunye neprofayili yaseHolyoke .
Ikholeji yeScripps: Xa usaya kwi-Scripps, ufumana inzuzo yekholeji yabafazi kunye nenzuzo eyongeziweyo yokubhalisa okulula lula kunye nawaphi na iikholeji zeClaremont .
Funda kabanzi kwiprofayili ye-College ye- Scripps kunye ne-Scripps GPA-SAT-ACT igrafu.
I-Simmons College: iMassachusetts inezikolo ezine ezichazwe kweli nqaku, kwaye iSimm inendawo ekhangelayo kwindawo yaseBoston yaseFenway. Funda kabanzi malunga nesikolo kwiprofayili yeSimm College kunye negrafu yeGPA, iSAT kunye ne-ACT idatha yeSmmons yokungeniswa.
I-Smith College: USmith, njengentaba yaseHolyoke, ilungu le- five-college consortium , ngoko abafundi banethuba lokuthatha iiklasi kumaziko angummelwane. Awudingi ukuhambisa i-SAT okanye i-ACT izikolo ukuze ungene kuSmith, kodwa usenokubona indlela olinganisa ngayo nabafundi abaye bavuma kunye neprogram ye- Smith College kunye negraphic Smith ye - Smith GPA-SAT-ACT .
Ikholeji yaseSpelman: I- Spelman yikholeji yamnyama kuphela yembali kuloluhlu, kwaye le kholeji yaseAtlanta, eGeorgia, ifumana amanqaku aphakamileyo ekuphumeleleni ekuncedeni abafundi bayo ukuba baphakame kwiimeko zentlalo-qoqosho. Funda kabanzi kwiprojekti yeClegel yaseSpelman kunye negrafu ye - Spelman GPA-SAT-ACT evumelekileyo .
Ikholeji yaseStene: Ekholeji yase Columbia, eMissouri, kwiKholeji yaseStene ibonisa ukuba akudingeki ukuba ube kwiMpuma okanye eNxweme yoLwandle ukuya kwiikholeji eziphezulu kakhulu. Funda kabanzi malunga nesikolo kwiprojekti yeKhole College kunye negrafu yeGPA, i-SAT kunye ne-ACT idatha ye-Stephens yokungeniswa .
I-Wellesley College: IWellesley iphantse ye $ 2 yezigidi kunye nobuchule obukhulu kunye neendawo ezifumene indawo kwindawo yam eluhlu lweikholeji zezobugcisa eziphezulu . Khangela isikolo esikhenketweni se- Wellesley College kunye neprofayili , kwaye ubone oko kuthatha ukuba ungene negraphethi yeWellesley GPA-SAT-ACT .
I-SAT Izikolo zokungeniswa kwiikholeji zeeNkomfa zaseMzantsi naseYunivesithi
I-SAT izikolo zokufakwa kwiiKholeji zeWisconsin neeYunivesithi
I-SAT izikolo zokufakwa kwiNkomfa yaseU.SA
Ingaba Iminwe Yakho Inamafutha Ukudlala Igitar?
Udweba Iimpawu zokwenza
Amasiko e-King King Pie neSigama
Indlela Yokufunda NgamaBuddha
IiNkcazo zeNkcukacha zeMbali kwiNtsapho kwiLebhenari yakho yaseKhaya
Indlela yokudibanisa isenzi esingaqhelekanga sesiFrentshi 'Ukusela' (ukusela)
Iingcaphuno ezizodwa zeMiyalezo yokuDala
UDomaso Pantera ixabiso leScarcar elivela kwiFransi
Indlela Yokumemezela nokuQalisa iiNqwelwana zoNyaka kwiDelphi
Amasiko okuNgcwaba eChina
Kutheni iTurkey yenza ukuba Ulale
Indlela yokudlala iBingo
Indlela yokugcina iiKlabhu zeGalofu
Iingoma eziphezulu ezingama-40 zamaKristu ze-2011
Uhlobo lweeMpahla zeeNdawo zokuLawulwa kweMpahla
IPalestina Ayikho ilizwe
Izikolo Zaseburhulumenteni Zase-Free kwi-Students of Michigan
Iifilimu ezigqwesileyo zohambo lweeNdlu
Ucinga ntoni emva kwexesha?
Iimpawu ze-Cute Couple ezivutha ingqondo yakho
Oko kuthethwa yi-oyile kwiDashboard yakho